ကိုကင်းနှင့်ဘလော့ဂ်ဂါ Martech Zone
လူးဝစ်စ်ဂရင်းသည်စိတ်ကူးယဉ်ရေးသားချက်တစ်ခုကိုရေးသားခဲ့သည် Blogging မှာအမဲသားဘယ်မှာလဲ။သင်အခွင့်အလမ်းရသောအခါထွက်စစ်ဆေးပါ။
ငါကောလိပ်ကျောင်းသွားတုန်းကငါလုပ်ခဲ့တဲ့စာတမ်းတွေနဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတစ်ခုကတော့ကိုကင်းစွဲလမ်းမှုဖြစ်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏အရင်းအမြစ်များကိုငွေမပေးသောကြောင့်ကြိုတင်တောင်းပန်သော်လည်းထိုအရာမှာမှန်ကန်ပါသည်။ အောင်မြင်သောစွဲလမ်းသူသည်သူတို့၏ကိုးနှစ်မြောက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွင်ပျမ်းမျှအားဖြင့်သူတို့၏အလေ့အထကိုစတင်သည်။ ကိုးနှစ်မြောက်! တနည်းအားဖြင့်ယနေ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဌာနကိုထူထောင်ပါ။ အကျိုးခံစားခွင့်များကိုကိုးနှစ်အထိပြန်လည်ပေးဆပ်မည်မဟုတ်ပါ။
ပြဿနာ? နိုင်ငံရေးသမားများကို ၄ နှစ်တကြိမ်မဲပေးကြသည်။ တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုမှာ အကယ်၍ မြို့ပြareaရိယာသည်ကိုကင်းနှင့်ပြhugeနာကြီးကြီးမားမားရှိပါကရာဇ ၀ တ်မှုများ လိုက်၍ …ခိုးမှု၊ တိုက်ပွဲများ၊ လူသတ်မှုစသည်တို့ဖြစ်သည်။ အမာခံနိုင်ငံရေးသမားများသည်ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်မဲပေးကြသည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့အမှားပြင်ဆင်ဖို့ကိုးနှစ်လိုတယ်မဟုတ်လား။ Hmmm ။ သူတို့ကသာ4နှစ်ရှိသည်။
ဒီတော့ဖြေရှင်းချက်ပြန်လည်နာလန်ထူကနေထောင်မှပြောင်းလဲသွားသည်။ အောင်မြင်သောနိုင်ငံရေးသမားများသည်ကိုကင်းသုံးစွဲသူပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှုန်းထားများတိုးတက်ရန်အမှန်တကယ်မကူညီကြပါ၊ လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီတတ်နိုင်သလောက်များများစားစားလမ်းပေါ်မှထွက်သွားရုံသာ သူတို့မှာတကယ်ရွေးချယ်စရာမရှိဘူး။ မဲဆန္ဒနယ်မှရလဒ်များကိုတောင်းဆိုသည်။ ရလဒ်အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကျဉ်းထောင်များသည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားလုပ်သူများနှင့်ပြည့်နှက်နေပြီး၎င်းအားဆက်လက်ထုတ်လွှတ်ခြင်း၊ ထောင်ချခြင်း၊ ပြန်လွှတ်ပေးခြင်း၊
ရေရှည်တွင်ထောင်ချခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်သည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစင်တာ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျော့နည်းစေသည်။ သင်သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ“ မူးယစ်ဆေးဝါးစစ်ပွဲ” ၏နှစ်ပတ်လည်ဘတ်ဂျက်ကိုကြည့်သောအခါပြန်လည်နာလန်ထူရန်အတွက်ဘတ်ဂျက်သည်ဘတ်ဂျက်တစ်ခုလုံး၏သတ်မှတ်ချက်မျှသာမဟုတ်ပါ။ သိပ္ပံပညာသည်တစ်နည်းနည်းဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအတိုချုပ်မလုပ်နိုင်လျှင်အဆုံးလည်းမရှိ၊ မျှော်လင့်ချက်လည်းမရှိ။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာတစ်ခုအနေဖြင့်ဘလော့ဂ်လုပ်ခြင်းဆိုသည်မှာ၎င်းသည်ရိုးရှင်းစွာဖြစ်သည်။ ဘလော့ဂ်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ပို့စ်တစ်ခုစီသည်နောက်ဆုံးနှင့်ဆက်နွယ်ပြီးနောက်တစ်ခုသို့ပို့သည်။ ဘလော့ဂ်တစ်ခုတည်းကသင့်အားမည်သည့်နေရာတွင်ရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းထောင်နှင့်ချီသောသူတို့သည်စာဖတ်သူများ၏အသိုင်းအ ၀ ိုင်းနှင့်သင်၏ဗဟုသုတ၊ သူတို့သည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်၊ စရိုက်၊ အခွင့်အာဏာနှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုပိုမိုသိရှိလာစေရန်ပြုလုပ်ပေးလိမ့်မည်။
ဒီတော့ ... ဘယ်မှာလဲ ရွယ် အဲဒါပေါ်မှာလား
သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒေါ်လာအတွက်သင် ROI ပေးရပါမည်။ သင်၏ကော်ပိုရေးရှင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ဘလော့ဂ် ၁၀ ခုရှိသည်။ ၎င်းတို့ကိုရေးသားရန်အမှုဆောင်အရာရှိ ၁၀ ယောက်ကိုအပတ်စဉ်နာရီနှင့်သူတို့ကိုကူညီရန်အိုင်တီ ၀ န်ထမ်းများအသုံးပြုသည်။ ဒါကဒီမျဉ်းကြောင်းပေါ်ကငွေအများကြီးမဟုတ်လား။ ပြီးတော့တစ်နှစ်အကြာမှာတော့အဲဒါကိုဘာပြရမလဲ။ စီးပွားရေးပိုလုပ်လို့ရလား အမြတ်ပိုရလား
ဤတွင်ပြproblemနာက၎င်း၏အရုပ်ဆိုးခေါင်းကိုပေါ်ပေါက်ဘယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုနှစ်အတွက်ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲခြင်းလည်ပတ်မှုပြီးဆုံးသွားပြီးယင်းအတွက်သင်ပြစရာဘာမှမရှိပါ။ သင့်ဘလော့ဂ်မှလာသည်ဟုသင်၏ဖောက်သည်အသစ်တစ် ဦး တစ်ယောက်မျှမရည်ညွှန်းနိုင်ပါ။ ဒီပစ္စည်းတွေကအလုပ်မလုပ်ပါဘူး ဒါဟာအားလုံး Web 2.0 ဖောင်းပွ! ငါတို့ဘလော့ဂ်မလုပ်ကြဘူး။ ကျနော်တို့ကနဖူးစည်းစာတန်းကြော်ငြာတွေကို ၀ ယ်တယ်။ သူတို့ကငါတို့ဘလော့ထက်ပိုကောင်းတယ်။
ကြော်ငြာများ၏ပြproblemနာမှာသူတို့သည်သင်၏ဂုဏ်သတင်းကိုမတည်ဆောက်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့အလားအလာ (သို့) ဖောက်သည်တွေကမင်းနဲ့စကားစမြည်ပြောခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ကရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimization အတွက်ကူညီကြဘူး။ သူတို့ကပါးစပ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ရလဒ်ပါဘူး။ သူတို့ကဖောက်သည်တွေကိုထိန်းထားဖို့အကူအညီမပေးပါဘူး
ရေရှည်တွင်သင်၏ဆက်ဆံရေးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုဂရုစိုက်မည့်အစား၊ သင်ထောင်ထဲထည့်ရန်ရွေးချယ်ရမည်။ သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်သည်ထောင်တစ်ခု၏လည်ပတ်တံခါးဖြစ်လာသည်။ ၀ ယ်သောကြော်ငြာများ၊ သာမန်ရလဒ်များ၊ ဝယ်ယူထားသောကြော်ငြာများ၊
သင့်အပေါ်မူတည်ပါတယ်။ အဆိုပါကိစ္စကိုအမှန်တကယ်မဟာဗျူဟာမြောက်သည်။ သင်၏အွန်လိုင်းတည်ရှိမှုနှင့်အခွင့်အာဏာကိုတည်ဆောက်ရန်အချိန်နှင့်အရင်းအမြစ်များကိုဖယ်ထားရန်သင်ဆန္ဒရှိပါက (၎င်းကိုဖယ်ရှားရန်သင်၌အရည်အချင်းရှိလျှင်) ရလဒ်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်သည်ပိုမိုအားကောင်းလာမည်၊ သင်၏ဖုန်းသည်မြည်လာလိမ့်မည်။ သင်သည်အစားထိုးမရသောဖောက်သည်များ၊ စာဖတ်သူများ၊ ပရိသတ်များ၊ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုပိုမိုအာရုံစိုက်လာသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
နေ့လည်စာစားပွဲတွင်ဘလော့ဂ်များနည်းပညာများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်စတင်လုပ်ကိုင်နေသည့်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်က“ ဘလော့ဂ်လုပ်တဲ့နေရာမှာသတင်းအချက်အလက်တွေရှာတဲ့နေရာတိုင်းမှာမင်းတို့ Doug ဆိုတဲ့နာမည်ကိုငါတို့တွေ့တယ်” ဟုပြောသည်။ ဒါဟာတကယ်တော့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ ငါက မဟုတ် A- စာရင်းဘလော့ဂါတစ် ဦး နှင့်ငါ့နာမကိုနေရာတိုင်းမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်ထိုသို့ပြုလုပ်ခဲ့သည် ထူးခြားသည် သူတို့သည်ငါ့ကိုသိသောကြောင့်မြင်သောအခါ၊
ငါကတစ်နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ဘလော့ဂ်ကိုလုပ်ခဲ့ပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဒါဇင်ဝက်တစ်ဒါဇင်လောက်ပိုပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့ရတယ်။ ငါစာရင်းဝင်စုံတွဲတစ်တွဲကျွန်မရဲ့ဆိုက်ကိုလာပြီးမှတ်ချက်ပေးတယ်။ အယ်ဒီတာတစ်ယောက်ဟာငါစာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်ခဲ့တယ်။ ' အရေးအသား (သူကကျွန်တော့်ကိုအကြံဥာဏ်ကောင်းတွေပေးတယ်)၊ ဒေသန္တရရုပ်မြင်သံကြားနဲ့အင်တာဗျူးတွေလုပ်တယ်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာလက်တွဲလုပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်၊ မရေမတွက်နိုင်အောင်မိတ်ဆွေဖွဲ့ခဲ့တယ်။ ငါ့အိတ်ကပ်ထဲမှာငါ့ပိုက်ဆံပိုများနေသလား။ ဖြစ်ကောင်းမဟုတ် ... ဒါပေမယ့်လာမယ့်ပါတယ်။
ငါဒီနောက်ထပ်9နှစ်လုပ်ကိုင်ဖို့ဆန္ဒရှိလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချ, ငါမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ရလဒ်မကြာမီဤနေရာတွင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ လွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်ကကျွန်ုပ်သည်စီအီးအိုနှင့်အတူကောင်းမွန်သောနေ့လည်စာစားခဲ့သည် Bitwise ဖြေရှင်းနည်းများ ပြီးတော့သူက“ ROI ဘယ်မှာလဲ” လို့မေးတယ်။
ငါ ROI လာမယ့်နေသည်။ ငါသည်ငါ့ဘလော့ဂ်ရေးရာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကောလိပ်ကျောင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မင်းကကောလိပ်တက်ပြီးဒေါ်လာထောင်ချီတဲ့ပညာရေးကိုသင်စဖွင့်တဲ့အချိန်မှာ၊ လေးလတစ်နှစ်စီကိုရပ်ပြီး ROI ဘယ်မှာလဲဆိုတာမမေးဘူး။ မင်းရဲ့အခွင့်အာဏာ၊ ယုံကြည်ကိုးစားမှု၊
1:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 5, 51 တွင်
Excellent က post ကို, Doug ။
1:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 7, 32 တွင်
မတ်လ 29, 2007 မှာ 3: 25 pm တွင်
အလွန်ကောင်းတဲ့ဆောင်းပါး, Doug ။ အလွန်ကျိုးနွံသောဖြစ်ပျက်သောဤသည်အခြား A-list ကိုဘလော့ဂါစဉ်းစားပါ!
17:2007 pm တွင်အောက်တိုဘာ 2, 10
စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်။ သင်ပြissuesနာများစွာပေါင်းစပ်ထားသည်။ မင်းရဲ့ဘွဲ့အကြောင်းရေးသွင်းဖို့စောင့်နေမည်။